Fiskebodarna - Stora Hammarsjöområdet | Hultsfred मा जानुहोस्
हेम » आवास » Cottages » Fiskebodarna - Stora Hammarsjöområdet
Fiskebodarna - Stora Hammarsjöområdet Hultsfred को लागी १० किलोमिटर पश्चिममा, Vimmerby को २ 10 मिनेट को बारे मा अवस्थित छ। क्षेत्र एक प्रकृति र माछा पालन संरक्षण क्षेत्र हो जुन लगभग about० ताल र पोखरी समावेश गर्दछ। प्रकृतिमा शान्त र शान्त मन पराउनेहरूका लागि एल्डरोराडो .. तपाईं मेरो ठाउँ मन पराउनुहुनेछ किनकि यो एकदम शान्त र राम्रो छ! मेरो आवास जोडी, एकल साहसी र चार-खुट्टे साथीहरू (घरपालुवा जनावर) को लागी उपयुक्त छ।
सामन बुक गर्नुहोस्
इन्द्रेणी बुक गर्नुहोस्
.Senvägen, 570 81 हल्ट्सफ्रेड, स्वीडेन
थन्डर Dr87 ड्रोन
राम्रो र राम्रो प्रकृति।
Njöt av den naturliga skönheten och lugnet i sjöområdet.
पानी र बिजुली चलाउन बिना कहिँको बीचमा। हामीले भर्खर यो मन पराए। ठुलो ताल र सानो बीच
//4 २ वर्ष पहिले
धेरै आरामदायक र राम्रो ठाउँ। ताल र प्रकृति सुन्दर भन्दा बढी हो। हामीले एउटा विशिष्ट "कुटेजहरू" भाडामा लिएका छौँ र वर्षा नभए पनि हामी त्यहाँ बस्न रमाईलो गर्‍यौं। पाल वा कारवाँको साथ पनि रहनको लागि उत्तम ठाउँ।